प्रचण्ड ओलीसँग मिलेपछि माओवादी नेताहरुले जन्माए नयाँ पार्टी, कसले गर्दैछ नेतृत्व ? — Imandarmedia.com
संयुक्त दलित अधिकार मञ्च नेपालले नयाँ पार्टीको घोषणा गरेको छ । आफ्नो चौथो स्थापना दिवसको अबसरमा मञ्चले विहीबार संवाद डबलीमा विशेष कार्यक्रम गरेर लक्ष्मण बर्देवाको संयोजकत्वामा १ सय ५१ सदस्यीय ‘पार्टी निर्माणको राष्ट्रिय अभियान’ को घोषणा गरेको हो ।
कार्यक्रममा शुभकाना दिँदै दलित अगुवा डा. निर्मल विश्वकर्माले एमाले र माओवादी केन्द्रले जति समृद्धिका नारा दिएपनि उत्पीडित जातिको अधिकार खोसिने खतरा बढेको बताए । उनले अब उत्पीडित समुदायका धेरै व्यक्तिले मागेर गुजरा गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए ।
विश्वकर्मा रुढिवादबाट ग्रस्त समाजमा बन्दुकले मात्रै परिवर्तन गर्ने बताए । उनले संघर्षबाट उत्पीडित समुदायले प्राप्त गरेका अधिकारको रक्षा र थप प्राप्तको लागि फेरि सशस्त्र संघर्षको अवश्यकता रहेको धारणा राखे ।
मञ्चको तर्फबाट रामशरण मजकोटीले अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमको संचालन दुर्गा बराइलीले गरेका थिए भने स्वागत मन्यतव्य सोचना रामदामले गरेकी थिइन् ।